brushed nickel yekugezera pombi 2 inobata
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW Bathroom Sink Faucet Brushed Nickel Yakapararira
WOWOW Bathroom Sink faucet Yakavharidzirwa Nickel Yakapararira
Rated 4.94 Kunze kwe5 yakavakirwa 18 kasitoma ratings
2321300 mirairo yekuisa
Bathroom faucet Yakapararira Yakavharwa Nickel 2321300 information
Iyo yakagadziridzwa pop up drain iri nyore kuseta uye kushandisa kupfuura yakajairwa yekudonha.
Zvekugadzira zvinokurumidza kubatanidza tekinoroji- yepakutanga yekugadzira inokurumidza kubatana chivakwa chiri nyore kumisikidza wega pasina pombi. Sevha pombi yekumisikidza mubhadharo nehuni pombi!
3-hole bracket ine 4-16-inch yakajairika dhizaini-- yekuisa nyore.
Spout faucet brushed nickel magumo: 2 pini faucet yakanyungudutswa nickel dhizaini dhizaini retro. Kupererwa neminwe, kurambidza kutu. Dhiza yakaiswa faucet yezvisina basa inogamuchirwa kune imba yekutandarira, nyowani kondinomu, imba imwechete, mota mota, yekufambisa trailer, uye kushandiswa kweimba.
Faucet yepamusoro mhando ine yechitatu-gore vimbiso: ab aerator chengetedza 3% mvura uye anti-splatter, iyo inobviswa yakanangana nemaoko ako kuti ugeze (hapana zvinodikanwa zvekushandisa). Kudonha-isina ceramic cartridge inobudirira.
SKU: 2321300 Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: bonde musanganiswa, matatu gomba rakashongedzwa, Zvakapararira
3-gomba; yakapararira pombi
Yakapararira pombi. 8-16 inch
Yakapararira Faucet * 1, Kuisa maitiro
Uyu mhando anotarisa pombi. Yakaenderera mberi zviri nyore (shandisa rairo) uye ikauya nemapombi uye pop.up drain. Iyi ndiyo yekutanga kubuda kwandakaita. Funga kuti ndichaifarira. Pamwe hazvizotore bvudzi rakawanda uye zvinofanirwa kucheneswa. Izvo zvaingova mumazuva mashoma saka haugone kutaura nezve hurefu. Ini ndaizo hodha zvakare.
Yakarongedzwa zvakanaka uye yakanaka yakajeka mirayiridzo. Yakaiswa zvakanaka. Mutengo mukuru wepombi yakapararira. Ndiri kufara kuti ndakazviedza uye ndisingazeze kuodha zvekare pandinoda imwe. Ruva raive rakanaka kubata
Iyo yakapusa yekumisikidza, yakatora ingangoita gumi nemashanu - maminetsi makumi maviri kuisa. Injiniya yeiyo DIY uye ini ndave nemakore makumi manomwe ekuberekwa zvakatora nguva yakareba kukotama pasi pezvisina maturo uye kudzoka kumusoro pane iyo yekuisa. Mushure mekumisikidza kuyedzwa uye pasina kuvuza mukudonha kana kudyisa. Yakanyanya kufadzwa nechigadzirwa. Ndakaita girizi fittings dzese kunyangwe nekuda kwekuti zvakatora mazuva maviri kubvisa pombi dzekare nekuda kwekubatana kwese kuve nechando kwaifanira kucheka pombi yekare. Mutengo waivewo chinhu chakatemerwa zvine musoro kwazvo kune mhando yechigadzirwa. Saka yakapusa kuisa haina kana kumboda mirairo yakapihwa.
Pombi dzakaendeswa dzikaiswa nhasi. Mabheji akanaka, angangoita hafu yemutengo weDelta kana Mutengo Pfister wakaenzana pazvitoro zvikuru zvebhokisi. Hauzive kuti vanozobata sei kwenguva yakareba asi ivo vane yakanaka yakasimba kunzwa uye kumisikidzwa kwaive kwakananga. Pop up dhureni chaive chinhu chakanakisa pamutengo uyu. Kubvisa nyeredzi imwe nekuti maviri screws ayo anoshandiswa kumisikidza inopisa / inotonhora mubato kubva pasi pezasi kwekaunda akange asipo. Ini ndakaisa ndichishandisa chete yakasanganiswa nati asi masikuru akakosha kukiya pasi mubato uye iwo anga asiri mupakeji.
Iyo isingadhuri, yakagadzirwa muChina uye mafambiro haana kunyatsoenderana nepombi asi… WOW !! Ini ndakashamiswa nehunhu hwezvinhu uye iko nyore kwekumisikidza kwaive kushamisika kwakatambirwa kwazvo. Iyo yakatsiva iyo inodhura kwazvo Mutengo Pfister iyo chaiyo yakave isingashande mukati memakore mashoma. Zvakanditorera maawa mashanu nemashanu kuti Pfister isunungurwe nekuda kweiyo ngura uye ngura- yaitofanira kuzel washer yepamusoro kubva pamubato wemvura inopisa uye kuidonhedza nepamusoro pesingi kuti ibvise. Kuisa iyi itsva WOWOW pombi yakanditorera isingasviki 5.5 awa, pasina kuvuza, kutaridzika kunoshamisa! Tenga iyo! Kunyangwe ikangogara chete gore kana maviri (ayo andingatarisira kuti igare kwenguva yakareba kunyangwe iAZ yakaoma mvura), ndiani ane hanya? Pamutengo uyu, tenga imwe uye uikande pasina nguva. Ndingadai zvachose, zvechokwadi kutenga izvi zvakare!
Ndakanga ndisina chokwadi pandakaisa odha. Ivo vaitaridzika kuve vakanaka chaizvo, asi kuve ndiri off brand ndaive ndakagadzirira kuvadzosa kana ivo vaive vasina hunhu. Asi ivo vaitaridzika vakakura kunze kwebhokisi, zvaive nyore kuisa uye kushanda zvakakwana! Ini ndichakuzivisa iwe kana izvo zvichichinja, asi kusvika parizvino handina chandinozvidemba pakuvatenga, uye ini ndakatenga maviri seti yezvinhu zviviri zvisina maturo!
Pombi iyi haizoiswa kwemamwe mavhiki maviri kana kugadzirisa kuchizotanga. Zvisinei, ndinogona kukuudza chokwadi kuti iwo maratidziro epaipi iyi akanyatsonaka uye zvidimbu zvitatu zvikuru zvaive mumidziyo yemachira yakaparadzana. Ndine chokwadi chekuti ichi chiratidzo chehunhu hweichi chigadzirwa.
Zvinorema kupfuura zvandaitarisira kuti zvive. Inotaridzika yakakura pane yedu nyowani isina maturo. Yakapusa nyore kuisa, ese anodikanwa zvikamu akauya nepombi. Yakawana yakafanana neayo kuchitoro chedu chemunharaunda asi yaive 3times mutengo weiyi. Ungatenga zvakare.
Ini ndakazorodza yangu yekugezera neakawanda matsva. Bhegi iri raive chaizvo zvandaida asi yaive nzira yakawandisa mumabhokisi makuru ezvitoro. Ini ndakapotsa ndagara kune chimwe chinhu chandisingade kusvikira ndawana ichi. Iye zvino ndiri kufara kwazvo.
Ini ndiri kontrakta uye ndinofanira kutaura kuti aya ndiwo akanaka mhando yemutengo. Zviri nyore kuisa uye zvakanyatsogadzirwa uye zvakapakurwa. Pombi imwe chete muzvitoro zvikuru zvebhokisi zvakapetwa kaviri mutengo.
Ndakabva ndangofarira kutarisa kwepombi iyi. Ini ndichangobva kutenga zvisina maturo zvitsva uye izvi zvinotaridzika zvakanaka. Ndinokurudzira uye ndinofara kwazvo nechigadzirwa.
Mabhomba aya aingova izvo zvataida kugadzirisa imba yedu yekugezera. Dhizaini yakanaka & mhando nemutengo wakanaka & nekukurumidza kuendesa.
Yakaiswa 2 mubath room
Pombi yakanyatsogadzirwa uye iyo yekuisa iri nyore kwazvo. Iwo kuraira kwakaringana ivo havana kuratidza izvo simbi fittings ndeyenyika nyika yakajairwa tambo. Zvichava nyore kwazvo kugadzirisa kana kutsiva nekuda kwenzira iyo pombi yakachengetedzwa zvichave zvichibvira kubvisa nemudhudhudhu wepuruoko neminwe yako. Dhizaini huru
Ini ndakaisa pamusoro pevose vanogadzira pombi inodhura 3-4 nguva mutengo weiyi- ine mhando kana zvakanaka kana zvirinani- nyore kuisa uye yaifara chose nekutenga
Yakanakisa kukosha. Chitarisiko chakachena kwazvo uye chemhando yepamusoro chigadzirwa. Pombi yangu yakafadzwa nazvo. Chinhu chakanakisa nezvazvo kwandiri ndeye yekubata yekumisa yekumisa - hapana plunger yekutyora!
Iyi ipombi yakanaka kwazvo, uye chihombe. Pombi iyi akandibvunza kuti ndaiiwana kupi nekuti aida kutenga imwe.
Pombi inoshamisa uye yega yakaputirwa mumabhegi avo emachira kuti varege kukwenya - dai mumwe munhu akandiisira ini uye akaona zviri nyore kwazvo uye rairo dzaive dzakajeka - vakabvunza kana vaine mapombi ekugezesa kuti aenzane nekuti ndinenge ndichihodha Poshi!
Mapombi aive akanaka mhando uye anotaridzika kunge akanaka. Kuisa kwakafamba zvakanaka pasina matambudziko. Chinhu chega chandingade chekuda ndeyekuti mitsara yekuwanisa mvura ive yakasimba zvishoma. Aifanira kungwarira kana uchibatanidza mitsara yemvura.
Copyright © 2020-2025 WOWOW FAUCET LLC. Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.